Ọ ka mma ibuli ibu ma ọ bụ nwayọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-ebuli ibu ngwa ngwa - mkpebi bara uru
Na-ebuli ibu ngwa ngwa - mkpebi bara uru
Ọ ka mma ibuli ibu ma ọ bụ nwayọ?
Ọrụ naJiri Nwayọọreps na-eme ka akwara gị nwee ike ịnwekwu oge n'oge nrụgide, karịa karịa naỌsọ ọsọreps. Maka ndị mbido, na-emeJiri Nwayọọreps na Mkpa ọkụigwebụ nzọ kachasị nchebe iji gbochie mmerụ ahụ. Ọ dịkwa mkpa na ị ga-elekwasị anya n'ụdị gị yana tupu ịmalite ịkwado arọigwe.Ọgọst 23 2019
JESE: know mara, otu n’ime ihe kacha mma Jeff kụziiri m kemgbe m na-arụrụ ya ọrụ bụ na ọ bụghị naanị ihe omume ka ị họọrọ, mana otu esi eme ha. JEFF: Jesse! Chei! Chei! JESE: Gịnị na-eme? JEFF: Kedu ihe ị na-eme? JESE: Ọ dị mma. Ya mere, cheta mgbe ị gwara m na ọ bụghị naanị ịme mmega ahụ, ọ bụ otu ị si eme ya? Si na isi A ruo mgbe B? JEFF: Ee.
JESE: Ọfọn, dude. Were bụ 100% ziri ezi. Ọmụmaatụ: were robot curl.
JEFF: Nke ahụ bụ ezigbo mmega ahụ. Ọ na - arụ ọrụ gị na - JESSE: Ee, mana nsogbu bụ, mgbe m mere ya otu a
Enweghị m mmetụta ọ bụla. Ọ dịghị ihe ọ bụla. Ma mgbe m ghọrọ robot - dị njikere? Biceps.
Nweta ihu. Biceps na ihu agha. Nwanyị! Ọ dị ịtụnanya! Ga-abụrịrị rọbọt ka ị nwee ike ịnụ curls robot.
JEFF: Odi mma. Mmadu aghaghi imechi gi, mmadu. Enwere m ike ịnweta nke a? Daalụ, nwoke.
JessE: Njehie sistemụ. Know maara na m ga - achọ ịnwale na enweghị mkpọtụ, na mkpọtụ. Enweghị mkpọtụ, na mkpọtụ.
JEFF: Gịnị na-eme, ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.comJEFF: Taa achọrọ m ịgbalị inyere gị aka ịchọpụta otu ị ga-esi mee mmeghachi omume gị na mmemme ọ bụla.
Ọ bụ nnukwu ajụjụ. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi bulie ibu. Anyị nwere ike inweta ya site na A ruo Z.
Anyị nwere ike ịnwa ịnweta ya site na A ruo Z ma lekwasị anya n'ọtụtụ nkọwa. Anyị nwere ike ịga n’ihu ya ọsọ ọsọ. Anyị nwere ike ịga nwayọ.
Ọsọ ọsọ. Ihe ndia nile, ndi be anyi, anyi matara na anyi kwesiri ilekwasi ha anya. Ma olee azịza ya? Ekwesịrị m ịza nke ahụ site na ịjụ gị ajụjụ mbụ.
Akpa igwe eji agba agba
Ajuju a bu, gini ka ina akuziri? N'ihi na ọ bụrụ na ị na-azụ maka ike ma ọ bụ hypertrophy, azịza ya nwere ike ịdị iche. Mgbe ị na-azụ maka ume, ọ dị otu ihe ị ga-achọ mgbe niile. Ihe mbụ ị ga-achọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma.
Site na nke a ka m na-ekwu na ị chọrọ ịnwale - ka anyị kwuo na ị pịa oche. Anyị ghọtara na ndị na-ebipụta oche ga-ewebata obi anyị, ubu anyị, na ihe ndị ọzọ. Anyị anaghị anwa anwa iche na bench pịa mgbe anyị na-achọ imeziwanye ike.
Anyị na-anwa ime ka akwara ndị a rụọ ọrụ ọnụ. Anaghị m asị, 'Hey, weghachi ubu gị' n'okwu a - ee, ịchekwa ubu gị, mana ịghara ịnwa ime ka obi gị na-agagharị. N'ezie, n'ezie inupụ.
Nweta nkwekọrịta obi siri ike dịka ị nwere ike, na-agbanye aka gị ọnụ na elu. Mba, isi okwu bụ ịkwaga ogwe ahụ ma jigide ọsọ ọsọ kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ dị mkpa. N’ezie, ị n’aga ije ọsọ ọsọ ka ịnwere ike ịbawanye ume ike, n’ihi na anyị ma na ike na ume na-agakọ.
Ya mere, ọ bụghị maka ịnwa ịkọwa otu akwara. Agbanyeghị, mgbe ị na-achọ ịzụ maka hypertrophy - ya bụ, ịba ụba akwara - ị kwesịrị ịchọ adịghị ike karịa arụmọrụ. Kedụ ka ị ga - esi ewebata ụzọ ọhụụ iji mee ka ihe ị ga - eme sie ike? Ka anyị na-eme nke a, otú ahụ ka nrụgide anyị nwere ike itinye na akwara na-enyere ya aka ịba ụba karịa ma gbanwee mmeghachi omume site na ịbawanye.
Ya mere, anyị ga-elele ọnọdụ dị iche iche. Aga m eji lat pulldown ebe a wee were ihe atụ ole na ole ebe anyị na-azụ maka ọdịda ruo otu ọkwa dịgasị iche. Anyị amaraworị na ọzụzụ ruo n'ókè nke ọdịda adịghị mkpa mgbe niile.
Nke a dabere na oke ọzụzụ gị. Mana iji mee ka ihe atụ a dị mfe nghọta, ka anyị kwuo 'zụọ ọdịda'. Ihe atụ nke mbụ ga - abụ, ka anyị kwuo na m na - eji akara ngosi - aga m ede ya ebe a - ka anyị kwuo na m na - eme lat pulldown na 10 reps max ma ga - ada na 10.
Ma na nke a, m na-ewere usoro yiri nke ọzụzụ ọzụzụ, na m na-echegbu onwe m maka ịga site na A ruo Z. Iji bugharịa mmanya ahụ site na A ruo Z ebe a. Nke ahụ bụ ọnọdụ mbụ.
Ihe nke abuo bu, Agam eji obere oku. Ọbụghị nnukwu. Ka anyị kwuo 12, 13 ugboro max na m na-azụ ruo ugboro 10 na-ada ada max. 10 imeghachi njehie.
Yabụ, na ọnọdụ abụọ ahụ - na nke a, ana m agbali itinye uche na itinye esemokwu ahụ n'otu akụkụ nke mbuli elu a, ana m agbali ịpịa. Ya mere, ka anyị lelee ihe ndị a yiri. Mgbe m mere ihe nlere nke mbu ebe a ma gaa n’igwe, ana m achoputa na obu n’ebe a ka m nwere ndi biceps dika ndi enyi m.
Aghọtara m na m nwere elu azụ dị ka enyi m. Amaara m na enwere m laim dị ka enyi. Aghọtara m na m na-anwa itinye osisi a n'elu obi m dị ka o kwere mee, na-emetụta ọtụtụ akwara.
Nke ahụ bụ ndapụta otu. Ihe na - eme, mgbe m rutere na nọmba 10, ana m anwa ịdọrọ na enweghị m ike ịme ọzọ n'ihi na ike gwụrụ m na njem niile. Ọ bụchaghị otu akwara na-esonye na mmegharị a.
Nke ahụ bụ ndapụta otu. Ihe atụ abụọ bụ nke a. Ebe m chere, 'Ugbu a, m ga-atọpụ nke a ntakịrị n'ihi na ihe m ga-eme bụ ilekwasị anya na ịme mmegharị a ka ọ ghara ịrụ ọrụ nke ọma' Karịsịa maka usoro m.
Yabụ na achọghị m mmeghe ma ọ bụ onyinye ọ bụla sitere na myforearms iji mezuo nke a. Achọghị m ka biceps dọtara m ebe a. Achọrọ m ịkpọlata ikpere m n'akụkụ m, adụkwasịrị m ma gbasaa ọzọ ka m wee nwee ike rụọ ọrụ lats ahụ karịa.
Yabụ ọ dị ka nke ahụ. M na-agbadata, afanyekwa, m ga-agbatị maka nke abụọ, m ga-abịa obere nwayọ maka eccentric. Anọ m na ala, ịkwanye ma gbagote, ịkwanye ma gbagote.
Pịa ma gbagote. Kwaa ma gbagote. Ya mere, ka anyi kwuo mkpuru ikpeazu m tufuru na 10.
Nke a bụ ibu m nwere ike ijikwa ma ọ bụrụ na emeghị m ihe ndị a niile maka ole na ole na-eme. Karịsịa 12 ruo 13. Ma akwụsịrị m na 10 n'ihi na enweghị m ike ọzọ.
Usoro ndị a na-eme ka ike gwụ m elu. Yabụ kedu ihe ọ bụ ugbu a? Ọ bụrụ na anyị lelee eserese ebe a, ọ bụrụ na nke a bụ ike na nke ahụ bụ nkwughachi m nke otu, isii, iri - ma ọ bụ otu, ise, ruo iri - ọkara, mgbe anyị malitere ụdị mgbatị abụọ a na eserese a, gịnị ka anyị na-eme? inwe? Ọfọn, anyị maara nke mbụ - ezigbo 10 reps na-eme 10 maka 10 ma ghara ichegbu onwe anyị banyere njem ahụ - nke a ga-abụ ọkwa siri ike ebe a. Ugbu a, nke nwere ihe kachasị nke 12 ruo 13 reps, ebee ka nke ahụ ga-adaba n'ihe banyere ikwughachi ugboro ugboro na usoro a siri ike? Jisos: N'okpuru! JEFF: Oh, Jesi! Ọ dị mma ịmara na ị naghị egosi naanị na intros.
Ya mere ugbu a - n'okpuru. O kwuru eziokwu n’ihi na ọ dị fechaa n’ibu. Ike nke nkwughachi a na-adị ntakịrị.
Agbanyeghị, ịmara - enwere m olile anya - na m nwere ike ime nke a site na dabere n'otù m si mee ugboro ugboro a n'ụzọ si A ruo Z, enwere m ike ịga n'ụzọ a nke mbibi ala mmụọ n'okpuru. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe atụ nke a, ihe niile ị ga - eme bụ ilelee ihe atụ dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na m nwere ibu arọ ebe a maka na ọ dị arọ karị, ọ pụtaghị na m ga-agbadata ebe a wee bido ya - nke ị hụrụ ọtụtụ ụmụ okorobịa - ọ nweghị uru ọ bụla.
abamuru nke ị aụ galọn mmiri otu ụbọchị
Nke ahụ bụ bullshit ma a bịa n'ịzụlite ma na-anwa ịzụlite hypertrophy na latissimus. Ọ bụ naanị igbu oge na mgbalị. Ya mere, m weere ihe dị arọ karị wee tụda ya ala ebe a.
Ya mere, anyị anaghị ekwu maka okpu. Anyị na-ekwu okwu banyere ihe atụ a ebe a. Otú ọ dị, rịba ama na n'ihi na etinye m ike ma lekwasị anya na mmega ahụ, enwere m ike ịbawanye ike a nke 1 na ebe a, ma ọ bụ karịa karịa, na ibu m dị, nke dị ntakịrị ala, na ihe na-eme mgbe ahụ , bụ njem ya n'okwu dum.
Ka ọ na-aga ugbu a, nke a bụ nnukwu ike rep. Nke a bụ nnukwu ike rep. Nke a bụ nnukwu ike rep.
Nke a bụ nnukwu ike rep. N'ebe a kwa, enwere m ike ike a naanị n'ihi ike ọgwụgwụ. Ya mere na-arịgo, ịrị, ịrị na ịrị.
Abata m na 10 ma emechara m. Nke a dị n'okpuru ebe a mara mma nke ukwuu n'ihi na anaghị m eji usoro ndị a eme ihe. Ya mere, ọ bụ gị onwe gị chere ya.
Gafere ugboro ugboro otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii na mgbe ọ dị gị ka naanị ndị siri ike bụ di na nwunye ikpeazụ. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu ebe a. Ị nọ ebe a.
Ị nọ ebe a. Ị nọ ebe a. Ọ bụrụ na anyị ebido ịmalite na njedebe ọ ga-arị elu ugbu a.
O nwekwara ike kwụsịtụ obere ma ọ bụrụ na e jiri ibu dị arọ. Mana lee ọdịiche dị na ogo nke setịpụrụ a. N'ebe a, m na-agwa ndị mmadụ oge niile, 'ine hụrụ adịghị ike na-anwa ịnweta hypertrophy na ị ga-ejedebe ebe ka mma' n'ihi na ike ahụ niile gbakọtara n'okpuru eserese a bụ ihe na-eme ka uto a na mbubata ibu.
Ọ dị mkpa karịa ihe anyị nwere ike ime ebe a. Ugbu a isi ihe ole na ole. Ihe niile bara uru.
Aga m agwa gị. Mgbe m were echiche a wee sị, “Amaara m ya! All m ga-eme bụ ịga nnọọ gwuo egwu na-na na-erughị ala. ”Oge nsogbu bụ ihe niile.
Ndi bekee, ana m ekwusa ọtụtụ 'oge erughị ala'. Ma ọ bụghị mgbe niile a blanket nkwupụta banyere oge n'okpuru erughị ala n'ihi na m nwere ike ịbịa ebe a afanyekwa dị ka ike m chọrọ. Ma pịgharịa, pịgharịa, pịgharịa, pịgharịa, pịgharịa.
N'elu. Push, piakota, pia. Nke ahụ nwayọ, eccentric, nwayọ, nwayọ, nwayọ, nwayọ, nwayọ, nwayọ - nke a niile na - eme nwayọ nwayọ.
O nweghikwa ihe o mere, ndị be anyị. Ọnụ ụzọ mbata ahụ dị oke ala. Ibu ahụ ezughi oke ụzọ ahụ iji mee ka ọ rụpụta ma ọlị.
Ọ gwụla ma ị na-agụgharịgharị n'ihi oke ibu nke metabolic. Ọtụtụ ndị mmadụ adịchaghị njikere ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na ihe gbasara ọzụzụ metabolic bụ na ị na-eburu ibu dị mfe maka ọdịda, mana ị ga-adị njikere iji nweta ya ike nke ị hụbeghị ogologo oge. Ọzọ. Iji mee ka ọzụzụ metabolic dị irè, ọ na - amalite mgbe ị - ikwughachi ihe malitere mgbe ịmalitere ọkụ.
Ọ bụghị 'Ọ bụrụ na ị gbaa ọkụ, ọ gafeela'. Mgbe ịmalitere ọkụ, ntọala gị ga - amalite na ị na - enweta nguzogide na - ere ọkụ a karịa otu. Ọ na-ewe ike iche echiche nke ọtụtụ mmadụ anaghị eji ebe ahụ.
N'ihi ya, ha na-eme ka ọ ghara ịdị irè. Otu onye nwere ike ịjụ, sị: “Ọ bụrụ otú ahụ, m̀ na-eleda mgbalị a anya ma ọ bụ na-eme ihe a?” Na nke ahụ, ana m aza 'Mba'. Are naghị akparị usoro a.
N'ihi gịnị? N'ihi na ọ ka dị - nke ahụ ka bara nnukwu uru, ụmụ okorobịa. Ọ bụ ezie na nke a dị mma maka ịmepụta hypertrophy, ọ dị mma maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Otu, ọ dị mma maka ọzụzụ ike.
Dị ka ihe atụ nke bench bench na mmalite. Ọ bụrụ na m ga-esiwanye ike n’ụzọ, ọ bụrụ na m dị mma n’agagharị mmanya ahụ nke ọma na lat pulldown ruo n’ókè m nwere ike bulite ntụtụ ahụ site na mgbatị gaa tụọ ụgbọ oloko, ụgbọ oloko, ọzụzụ; Adịghị m aka ike na mbuli elu a? Ekwesighi ime ka ike niile dị na 2, 3, 5. Ọ bụ akụkọ ifo.
Nwere ike ịmalite ike na nso nso ọ bụla. Ihe dị mkpa banyere ya bụ na ike kachasị elu na-emeziwanye ebe ahụ - nke ahụ bụkwa egwuregwu n'ihi na m na-akwagharị ọtụtụ akwara. Inweta akwara na-arụkọ ọrụ ọnụ ịmegharị ụlọ mmanya a.
Isi okwu a abụghị ka ị kewapụ onwe gị iche iji mepụta ibu adịghị mma nke lats. Nke a bụ ịrụ ọrụ dị egwu nke ọma. Ma na njedebe a ike na-akawanye mma, gịnị na-eme obere ntụpọ ahịhịa ndụ? N'ihi na ọ na-amalite ala ebe a, nke a ga-arịgo.
Ike m n'ozuzu ga-abawanye. Enwere m ike ịmalite na ọkwa dị elu n'ebe ahụ, mana akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-amalitekwa na ọkwa dị elu. Mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-awụlikwa elu, ọ na-amali elu n'ọkwa dị elu karị.
Ya mere iwelite ike anyị kachasị elu ga-emekwa ka ike anyị gbanwere nke anyị nwere n'ihe atụ nke abụọ a. Yabụ, ndị be anyị, ihe a niile dị mkpa. Mgbe ị na-emega ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghọta otu esi emega ahụ.
Ikwesiri ighota ebumnuche nke nkuzi gi. Karịsịa, ị kwesịrị ịghọta ihe kpatara ị nọ ebe ahụ na mbu. Ọ bụghị maka ịkwaga site na isi A ruo B ma ọ bụ site na isi A ruo Z - agbanyeghị ị na-eme ya.
Oge ụfọdụ ọ bụ maka njem n’etiti, dabere n’ihe ị na-azụ. Enwere ihe kpatara anyị ji agbaso usoro dịgasị iche iche na mgbe anyị na-eme ha. Anyị na-eme mmemme ha n'ebe ụfọdụ iji gbochie ụfọdụ mmeghachi omume.
Anyị na-eme nke a na mmemme anyị niile, dabere na ebumnuche ị chọrọ iji nweta n'oge ahụ. Ha niile gafere ATHLEANX.com.
Ka ọ dị ugbu a, hapụ echiche gị na isi aka gị. Mee ka m mara ihe ọzọ m chọrọ ikpuchi ma m ga-emere gị ya. Ọ bụrụ na ịnwebeghị, denye aha ma gbanye ọkwa gị ka ị ghara ịhapụ akụkọ ọhụụ mgbe anyị biputere ya.
Ndi mmadu niile. Ka ahụ oge n'adịghị anya.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na i bulie ibu ngwa ngwa?
Ọ bụrụ na ịchọrọ akwara siri ike, Nnyocha nke 2014 na European Journal of Sports Science na-akwado ihe onye na-ekwu okwu ike kwuru.Na-eweliiheibu ibudikangwa ngwaka o kwere omume na ụzọ elu, dị ka megidena-eweliiheibu ibunwayọ, na-emegịike.Jenụwarị 25. 2017 Nọvemba
Ibu ibu dị ngwa ọ dị mma?
Uru nkena-emeyangwa ngwa: 'Ngwa ngwaikwughachi ihe ga - enyere gị aka inweta ikike ma nwekwaa ike gị, ”ka Khemani na-ekwu. Akshar dị ngwa ịgbakwunye, “Ibu ibuọzụzụ na aỌsọ ọsọijeụkwụ gụnyere ọrụ zuru oke nke njikọ anụ ahụ ma wulite ntachi obi. ”Jenụwarị 19 2020bọchị 2020
Ọtụtụ ndị mere mkpebi ifelata na-ajụ onwe ha ajụjụ siri ike. Hà kwesiri ime kadị ma ọ bụ bulie ibu? N’isiokwu a, aga m agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka nke ọ bụla iji felata. (egwu na-ada ụda) Echere m na ihe mbụ anyị chọrọ iche banyere bụ nke na-eme ka calorie dịkwuo ọkụ.
O doro anya na ndị ọkà mmụta sayensị lere ya anya. N'ọtụtụ ọrụ, ka ị na-atụkwu, ka calorie gị na-erekwu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị dị kilogram 160 ma ọ bụ kilogram 73, ị ga-akpọ ihe dịka 250 ka ọ ga-eresị nkeji iri atọ ọ bụla nke ịgba mwe mwe ọsọ.
Ọ bụrụ n ’ịgba ọsọ ọsọ ọsọ dị 10 kilomita / h, ị ga - akpọ ihe dịka calorie 365 na minit 30. N’otu oge ahụ, ị ​​ga - ere ihe dịka calorie 130 ruo 220. Ya mere, n'ozuzu, ị na-erekwu calorie kwa otu oge karịa ka ị na-eji oke ibu na otu mgbalị.
Ma nke ahụ abụghị naanị ihe ga-atụle. Adịghị emega ahụ? Ọzụzụ ibu na-enyere gị aka ịmekwu calorie. Don't naghị emega ahụ.
Ọzụzụ siri ike dị irè karịa kadio na iwulite ahụ ike. Mkpụrụ ahụ na-erekwu calorie na ezumike karịa anụ ndị ọzọ dị ka abụba. Ọ bụ ya mere ị ji nụ na ịkpụzi akwara bụ isi ihe iji mee ka ike izu ike gị, ike izu ike gị, nke na-ezo aka n'ike ike ị na-ere mgbe ị na-ezu ike.
Ọmụmụ ihe a tụrụ izu ike nke ndị sonyere n'oge izu 24 nke ọzụzụ dị arọ. N'ime ụmụ nwoke, ọzụzụ ike ugbu a rụpụtara ịrị elu 9% na metabolism izu ike. Mmetụta dị na ụmụ nwanyị nwere mmụba nke. belata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4%.
Nke a dị mma ugbu a, mana ọ dị mkpa ịtụle ka calorie ole nke a na-anọchite anya ya. N'ime ụmụ nwoke, ike izu ike na-amụba site na ihe dị ka calorie 140 kwa ụbọchị. Maka ụmụ nwanyị ọ bụ naanị ihe dị ka calorie 50 kwa ụbọchị.
Ihe omumu nke ike a ghaghi abawanye, kama o ga-abawanye site na obere ego. Otú ọ dị, ọzụzụ dị arọ nwekwara calorie ndị ọzọ dị mkpa na-aba uru calorie n'ime awa ole na ole mgbe ọzụzụ ọzụzụ dị arọ jiri ya tụnyere mgbatị cardio. N'ezie, enwere akụkọ banyere mmụba izu ike zuru ike ruo ihe dị ka awa 38 mgbe ọzụzụ dị arọ, ebe ọ bụ na enweghi mmụba dị otú a na akuko. Uru na-ere ọkụ nke ọzụzụ dị oke abụghị nanị na oge ahụ.
Burn na-agbanyekwu calorie ruo ọtụtụ awa, ọbụlagodi ụbọchị, mgbe nke ahụ gasịrị. Ọzụzụ dị elu nke oge dị elu na-enye uru ndị yiri nke cardio n'oge obere oge. Ọ bụ ezie na mgbatị ahụ na ibu ibu bụ abụọ n'ime egwuregwu mgbatị kachasị mkpa, enwere nhọrọ ndị ọzọ.
Otu n'ime ha bụ ọzụzụ dị elu dị elu ma ọ bụ HIIT, nke gụnyere mkpụmkpụ, nkeji ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-agbanwe na usoro mgbake na obere ike. Otutu mgbatị ahụ HIIT na-ewe 10 ruo 30. Jiri HIIT jiri ọtụtụ omume dị iche iche, gụnyere ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè, eriri na-awụlikwa elu, ma ọ bụ mmega ahụ ndị ọzọ.
Kedu otu HIIT si arụ ọrụ na Calories Na-ere Ọkụ? ego? N'ezie, enwere ọmụmụ ihe atụlewo HIIT na mmega ahụ nke nkịtị. Nnyocha banyere ihe karịrị 400 ndị buru oke ibu na ndị buru ibu buru ibu chọpụtara na HIIT na mmega ahụ nke ọdịnala na-ebelata oke abụba na oke olu site na otu calorie dị ka cardio ọdịnala, ọ bụ ezie na nke a dabere na mgbatị ahụ. Dịka, ị na-ere otu nọmba calorie na HIIT, mana n'oge dị mkpirikpi.
Na njedebe, ma akụrụngwa ma ọzụzụ ike nwere ike inyere gị aka ịrịa ahụike. Mgbatị ahụ nke obi na-ere calorie karịa ike ọzụzụ, mana metabolism gị na-adị elu ogologo oge mgbe ị nwesịrị ọzụzụ. Ọzọkwa, ọzụzụ dị arọ ka mma maka iwulite ahụ ike.
N'ihi ya, ezigbo usoro mgbatị ahụ kwesịrị ịgụnye ma cardio na ọzụzụ ike, ọ bụghị naanị otu ma ọ bụ nke ọzọ. Daalụ maka ikiri. Jide n'aka na ị na-enye isiokwu a isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya ihe ọmụma et gburugburu YouTube Idenye aha na Healthline Authority Nutrition ọwa site na ịpị red Idenye aha button n'okpuru isiokwu a.
Ogologo oge ole ka ogologo iji bulie ibu?
Nkeji 30 nkeji oge maka onye mbido. Nwere ike ịrụ ọrụtoro ogologonaigwe, ma egbula mọzụlụ, mmega atọ kwa otu akwara nwere ọtụtụ (dị elu). Ọ bụrụ na ịibu ibuzụọ ihe karịrị nkeji 60 ikekwe ịme otu n'ime ihe abụọ, ọzụzụ karịa ma ọ bụ ikwu okwuỌzọkwaukwuu.Dec. 13 2018
Kedu ihe na-eme ndị egwuregwu Elite THENX? Ọ bụ Chris Heria, nabata na isiokwu ndị ọzọ THENX. Taa, anyị ga-aza ajụjụ a, you nwere ike ịzụ ụbọchị ọ bụla? Ka anyị chọpụta nke bụ eziokwu banyere overtraining. (Okwusi ike, egwu siri ike) Ọ dị mma Ka anyị bido.
Taa, anyị na-aza ajụjụ a: ị nwere ike imega ahụ kwa ụbọchị? Anyị ga-achọpụta nke bụ eziokwu gbasara ịgabiga ọtụtụ ọzụzụ. Azịza nye ajụjụ a, ị pụrụ imega ahụ kwa ụbọchị? Azịza ya bụ, ị pụrụ ịna-emega ahụ́ kwa ụbọchị. Can nwere ike ịzụ ọzụzụ siri ike, mana ị gaghị enwe ike ịme ha abụọ ogologo oge? Mgbe i mechara na-azụsi ike, otu ike ị nwere ike, kwa ụbọchị, ma ị mee nke a n’enweghị ịmalitegharị, ahụ gị ga-emecha daa mbà.
Ọ ga - emecha kwụsịlata ị ga - emecha daba na mgbidi ahụ. Will gaghị enwe ọganihu ọbụla ma ọlị. Nke a bụ ebe ịdọgbu onwe ya n'ọrụ na-enwe ike ịbawanye ike ma nwekwaa akwara.
Mgbe ị zuru ike, wulite ma mezie eriri akwara ndị ahụ ka ị nwee ike ịlaghachi ọrụ n’echi ya ma rụọ ọrụ karịa ma buru ya ọkwa ọzọ. Izu ike di oke mkpa. Ọ dị oke mkpa dị ka ọzụzụ siri ike.
Mgbe ike gwụrụ gị, ị ga-apụ. Gaghị enwe oganihu ọ bụla n’ebe ahụ bụ ebe mwakpo na-abata, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ịhazi mmega ahụ gị. Nke a apụtaghị na ị gaghị emega ahụ kwa ụbọchị.
Mana nke ahụ apụtaghị na ị gaghị azụli nnukwu ike. Nwere ike ịme ha abụọ, ị gaghị eme ha abụọ oge niile, n'ihi na nke ahụ agaghị arụ ọrụ. Nwere ike ịmega ahụ kwa ụbọchị site na Mọnde ruo Mọnde, ọ bụrụ na ịmalite izu mbụ, kwuo nke ọma, wee mechaa site na ngwụcha izu, mee mgbatị ọkụ ma ọ bụ obere mmegharị ọkụ, ma ọ bụ naanị ịme usoro ma ọ bụ mee ihe Cardio, ihe dị ka nke ahụ.
N'ezie, m na-eme nke a kwa ụbọchị. Ana m emega ahụ n'ụzọ kwa ụbọchị n'ihi na n'oge ụfọdụ n'ụbọchị, n'ụbọchị ezumike m, a na m eme ụdị ọrịa kadị ma ọ bụ ụdị usoro ọ bụla, ọ bụ naanị ịme aka m, aka aka m, ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ , ya mere ee, ị nwere ike ịzụ ụbọchị ọ bụla, ọ gaghị agabiga otu ike ahụ ọ dị na mbụ n'izu a. Ugbu a ị nwekwara ike zụọ ọzụzụ na oke ike n'izu ahụ niile wee were ngwụsị izu iji rụzie ahụ gị ma mee ka ị dabara maka izu na-abịa.
Ihe niile dabere na ebumnuche gị na ụdị ndụ gị. Ihe kachasị mkpa bụ naanị ịge ahụ gị ntị. Mgbe ọ dị gị ka ịchọrọ izu ike ahụ, ọ dị gị ka ahụ gị ọ na-egbu gị mgbu na ị naghị echegbu onwe gị, oh Chris kwuru na ọ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị.
Ọbụna n’ụbọchị ezumike ya, ọ na-eme obere ihe. Ee, nke ahụ ziri ezi, mana ọ bụrụ na ọ naghị adị m ka ọ ga-eme ya ụbọchị ezumike m, agaghị m eme ya. Ọ dịghị amasị na ọ bụ ihe na-adịgide adịgide m na-azụ ebe a kwa ụbọchị.
spinning eme free
M ka na-eji ezumike ụbọchị abụọ na nkwụsị ụbọchị n'etiti mmemme mmega ahụ m. Ihe kachasị m mkpa bụ na ị na-esi ike mgbe ị na-azụ ọzụzụ nakwa na ị na-agbagha onwe gị mgbe niile. Ọ bụrụhaala na ị nwere nri kwesịrị ekwesị, ịtraụbiga mmanya ókè.
Ugbu a, m ga-egosi gị ihe ndị ọzọ na-eche bụ overtraining. Anyị ga-eme mgbatị ahụ siri ike, mgbatị ahụ zuru oke. Ihe omumu mbụ ga-abụ nkwụ aka.
Anyị na-aga jirichaa ndị a handstand pushups. Anyị ga-abanyezi akwara dị arọ, na-eme anyị dips, dọpụta, niile na nke ọzọ, anyị ga-eme otu dobe, ise, 10, 10, nke mbụ, asaa, asaa, asaa esote set. Anyị ga-aga n'ihu na ndọtị nwụrụ anwụ.
Anyị ga-ebuli arọ, yabụ anyị ga-eme ugboro atọ na ise. Anyị ga-aga mmanya na ụkwụ. Anyị ga-ejide otu ogwe aka, atọ na ogwe aka nke ọ bụla, wee banye na 10 na ogwe aka abụọ.
Site ebe anyi ga aga na straddle planche pushups. Anyị na-eme asatọ na mgbe ahụ anyị na-eme a tụlee nke dips. Anyị ga-etinye efere ma anyị ga-eme ise, wepụ efere ole na ole, isii, wepụ efere, asaa, wepụ efere ikpeazụ, wee buruzie ibu ahụ.
Mgbe ị dị njikere, ka anyị bido. Ihe omumu mbu ga - abu aka. Umu unu di njikere, ka anyi bido. anyị ga-kacha nke a. (bouncing, pounding beat) Ọ dị mma, nke ahụ bụ obere mma-mma.
Ọ na-aga n'ihu. Anyị nwere akwara, kwụ ọtọ ọtọ, dọpụta elu. Nke a bụ ụlọ akwụkwọ ochie.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị m. (bouncing, pounding beat) Nke a ga-abụ ihe na-atọ ụtọ. Ọsụsọ agbaworị m ọnụ.
Ọ dị mma ka anyị mee ahụ ike, ogwe aka ọtọ, dọpụta elu, 5, 10 (kpụ ọkụ n'ọnụ, ịkụ aka) Oh, nke ahụ bụ ara ara, oh chim, ọ dị mma, ọ bụ oge ịhapụ set. (ngwa ngwa, na-akụ ụda) Ugbu a, ihe ndị ọzọ bara uru (ọchị). asaa, asaa. (bouncing, pounding kwaa) m ga-agbago ọzọ. (egwu elektrọn nwayọ) (ọchị) Nke ahụ bụ nzuzu.
Oo chimoo. Ka m nweta nzu maka nke abuo n’ihi na ọsụsọ na-agba m. Oge ọkọchị ebe a na Miami ma enweghị ikuku ikuku ebe a.
Fans adịghị na. Ọ bụ ihe dị ka otu narị ogo ebe a. Ọ bụ ya mere m ji ajirija dị ka onye ara.
Ọ dị mma, ya mere ugbu a, anyị nwere mbubata ike. Anyị ga-aga site na ugboro atọ ruo ise. Ebe ọ bụ na anyị na-eweli kpamkpam.
Ọ dị mma, ka anyị pụọ. (Egwu siri ike) Phew! Damn, nke ahụ siri ike mgbe akwara ndị ahụ gasịrị. Ọ dị mma, na-esote, mkpịsị ụkwụ na mmanya ahụ.
Ka anyị mee ya. (Egwu dị egwu) Ọ dị mma, yabụ na anyị ji otu ogwe aka gafere. (ike dị ukwuu, ịkụ aka egwu) Phew! Nke ahụ siri ike karịa akụkụ nke ọzọ.
Ka anyị gaa maka 10th (ike siri ike, ịkụ egwu) Ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka anyị mechaa. egwu dị nwayọọ) Echere m na m debanyere aha? O siri ike. Ngwa, ka anyi jee. (ike dị egwu, egwu na-ada ụda) Oh my god what the hell.
Nke ahụ bụ ihe na-agaghị ekwe omume omume Nke a Phew! Ọ dị mma, nke ọma, emere m ya ụzọ m nwere ike isi ebe ahụ. Ka anyị gaa na mmega ọzọ. Anyị na-eme otu ụdị nke ndị a dị arọ ebe a.
Ana m ewepụ otu efere n’otu oge. (ngwa ngwa, egwu na-ada ụda) Oh, ọ dị mma. (chuckles) Ha dị mma. (ngwa ngwa, egwu na-akụ ụda) Ọ dị mma, ka anyị pụọ. (egwu di nwayo, na-ada ụda) Ka anyị gaa, nke ahụ dị ise. (nwayọ, na-ada ụda na-ada ụda) Aah, isii. (Na-adịghị ngwa, ịkụ aka akụ) Ka anyị gaa, ọ dị mma. (egwu egwu na-ada ụda, na-ada ụda), ka anyị gaa, nke ikpeazụ. (egwu di egwu) di nma.
Anyị agaba. (egwu, egwu siri ike) Aah, phew! (egwu siri ike) M na-eme ọsụsọ na mgbatị ahụ dum. Nke a bụ n'ezie mgbatị ahụ na-egbu egbu ebe a.
Ọ bụrụ na mgbatị ahụ dị taa maka gị, ọ bụrụ na ihe mmụta ahụ masịrị gị, ị nwere ike ịrụ ọrụ kwa ụbọchị? Ee, ị nwere ike ịzụ ihe ahụ siri ike kwa ụbọchị? Ọ dị mma ịzụ ahụ gị dịka m na-etinye onwe m na mgbatị a, iji nweta ahụ gị site na mgbatị siri ike nke na-ama gị aka kwa izu, ikekwe ọ bụghị kwa ụbọchị n'usoro, mana ị ga-eweli onwe gị kwa izu. M n’ezie na-arụsi ọrụ ike dịka o kwere mee, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ise n’izu. Ọ dịkarịa ala na Mọnde ruo Fraịdee m na-anwa ije ije dị ka o kwere mee, enweghị mgbaghara ọ bụla, ị na-ehi ụra kwesịrị ekwesị, ị ga-ahụ uru ndị ara, ike na-adịghị mma na enweghị isi.
Nke ahụ bụ n'ụzọ nkịtị, a ga m enye unu nghọta ntakịrị n'ihe m na-eme na ihe m mere iji wee ruo ebe m nọ taa, ọ bụrụ na ịchọrọ isonye mgbatị ahụ were mmemme nke m mere iji ruo ebe m nọ taa, Bụrụ onye otu nke THENX.COM ugbu a. Nweta mmemme niile anyị na-eme kwa ụbọchị, mmega ahụ niile anyị na-eme kwa ụbọchị, ịnweta egwu niile anyị nwere ebe a na channelụ THENX, ị nwere ike ịlele anyị THENX -Dịgharịa ngwa ahụ site na Storelọ Ahịa App iji were mgbatị na mmemme anyị. ị ebe ọ bụla ị na-aga THENX IGNITE.
Ọ bụ tupu-emega ebe ị na-efe site na mgbatị gị. Ọ bụrụ na ị hụla m ka m na-eji eriri dị arọ n'oge a oge ochie, nke a bụ n'ezie ihe ga-eme ka ị banye n'ọkwa ọzọ site na ịmalite itinye ahụ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ eriri dị arọ, anyị nwere ya na THENX.COM/SHOP.
Nweta kwa ngwaahịa gi nke g’enyere gi aka na ulo ahia anyi, dika ihe nkpu aka anyi ndi THENX, nke inwere ike izuta ugbua na shop anyi, THENX.COM / SHOP, nke g’enyere aka na mgbu mgbu, ma nwekwaa ike nkwughachi gi. Ndị mmadụ, cheta na anyị na-eziga Sọnde ọ bụla na 8: 00 pm
Oge Ọwụwa Anyanwụ US, na onye mbụ na-ekwu okwu ma na-amasị isiokwu ahụ ga-emeri ihe nrite THENX. Isiokwu a maka izu a na maka izu na-esote ga-abụ akara ọhụụ ọhụrụ anyị na-acha uhie uhie THENX. Onye mbụ kwuru okwu banyere edemede a, yana edemede ọ bụla anyị buliri na 8: 00 pm
Oge Ọwụwa Anyanwụ, ga-enweta onyinye ụfọdụ mgbe ọ bụla. Hụ ụmụ ụnụ. Nke ahụ bụ okwu izizi.
Daalụ maka ikiri. A hụrụ m gị n'anya. Na-ezu ike. (Ike, egwu siri ike)
ịzụ ọhụrụ igwe kwụ otu ebe
Gini mere bodybuilders ji eme ngwa ngwa?
NtọalaRepSpeed ​​N'ihiNdị na-edozi ahụ
Ntughari ọsọ dị mkpa n'ihi na ọsọ ọsọ dị iche iche na-emepụta mmetụta ọzụzụ dị iche iche. IheỌsọ ọsọngwa ngwa, belata akwara ike.Ngwa ngwa ngwakwe ka ị jiri arọ dị arọ, mana belata esemokwu, yabụ ị na-azụ ahịa maka ike na ọsọ.08.17.2020
Ijide ibu dị arọ ọ na-ewulite ahụ ike?
N'oge ọ bụla staticjigidena-emega ahụna-eke ihena, nke a bụ okwu bụ isi, na-akwado esemokwu naakwara(s), ka Luciani na-ekwu. Ọzọakwarammebi pụtara iheakwarauto mgbe ndị ahụakwaraemep uta eri, 'o kwuru. Otu ihe ọmụmụ 2005 na-arụtụ aka na uru ndị a na-ewusi ike.20.05.2020
Ọ dị mma ibuli ibu n ’afọ efu?
Na-ewelina iheafọ efuagaghị emerụ uru gị, ọ bụrụhaala na ị naghị eri nri nri nri abụọ ahụ maka nri ehihie ma na-eri nri n'ụzọ dị mma, Melody L. Schoenfeld, ọkachamara n'ihe banyere nri na onye nwe ụlọ ọrụ ọzụzụ na-enweghị ntụpọ.
Enwere m ike ibuli igwe dị kwa ụbọchị?
''Na-eweli ibu kwa ụbọchịọ dị mma ma ọ bụrụhaala na ị na-ezu ike otu mọzụlụ ndị ọzọ, 'ka Brathwaite na-ekwu. 'Ọ bụrụ na ị dị elu ma na-azụ ụbọchị anọ ma ọ bụ isii n'izu, aga m akwado ịkwatu akwara dị iche iche na ụbọchị azụ gị, na-ekwe ka ụbọchị abụọ ruo ụbọchị abụọ n'etiti nnọkọ na-arụ otu otu ahụ ike.'08.09.2020
Iweli ihe dị arọ ọ̀ na-agba abụba afọ?
Ọzụzụ iguzogide na-aghọwanye ihe dị mkpa ka anyị na-aka nká, n'ihi ọtụtụ ihe, gụnyere ibelata nchịkọta nkeafọ abụba. Nnyocha e bipụtara na mbipụta 2013 nke International Journal of Cardiology gosipụtara na ọzụzụ iguzogide ike dị elu na-ebute ngwa ngwaafọ abụbaọnwụ karịa ọrụ cardio naanị.
Enwere m ike ibuli ibu maka awa 2?
.B.abụọ-hour ibuli elunnọkọ ụbọchị isii n'izu ọ bụla nwere ike ịdị ka usoro a raara onwe ya nye, mana ọ bụ maka ọtụtụ mmadụ. Nke ahụ bụ n'ihina-ewelikwa mgbe kwa ogologonwere iken'ezie bụrụ ihe na-eweta uru ịzụlite ahụ ike na ume.Sep 16 2018
Ọ dị mma mgbatị ahụ maka awa 2?
AKWIVKWỌ AKW ACTKWỌ. Ntuziaka mmega ahụ ugbu a bụ na ndị okenye kụrụ otu n'ime ebumnuche ndị a: opekata mpe nkeji 150 (elekere 2na 30 nkeji) na 300 nkeji (5awa) inwe mgbatị ahụ kwa izu dị ka ije ije siri ike, ịnyịnya ígwè, ịgba tennis, ma ọ bụ nhicha dị ọcha.
Kedu ụzọ kachasị mma iji bulie ibu mgbe ị na-ebu ọnụ?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibuli elu mgbe ị na-ebu ọnụ, werezie iji obere ibu ma rụọ ọrụ na obere ike iji tinye obere ahụ n'ahụ gị. Egbula ilekwasị anya na ịzụlite akwara n'oge a. Ọ bụrụ na atụmatụ ọnụ gị na-enye gị ohere ị toụ ihe ọicesụ juụ, thenụọ ya.
Kedu ụzọ kachasị mma iji bulie ibu?
Oge kachasị mma na-ebuli elu, ọtụtụ oge, bụ nke na-enye gị ohere ilekwasị anya na akwara ị na-achọ ịmalite, ka Schoenfeld na-ekwu, ma si otú a mee ka njikọta uche na akwara.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji bulie otu paụnd ibu?
Ogologo ahụ bụ otu sekọnd atọ na akụkụ abụọ nke ikwughachi ya - concentric (na-eweli arọ) na eccentric (na-agbada ya). Nke ahụ bụ ma eleghị anya otú ọtụtụ n’ime anyị si ebuli na agbanyeghị.